မြှျောခဲ့ဖူးတဲ့ ကောငျမလေး …. – Shinyoon
မြှျောခဲ့ဖူးတဲ့ ကောငျမလေး ….
စောငျ့ရခွငျးတှေ မြှျောရခွငျးတှဟော ဘယျလောကျပငျပနျးစလေဲဆိုတာ စောငျ့ခဲ့ဖူးသူတှေ မြှျောခဲ့ဖူးသူတှပေဲ သိပါတယျ ။ ပျေါလာနိုးနိုး ပျေါလာနိုးနိုးနဲ့ မြှျောခဲ့ဖူးတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျရဲ့ ရငျဖှငျ့သံပေါ့ ။
လာခဲ့မယျလို့ ပွောထားခဲ့ရငျတော့ မမြှျောပါဘူးလို့ ဘယျလောကျပွောပွော ကိုယျ့စိတျထဲမှာတော့ မြှျောမိနတေတျတဲ့ စိတျလေးတှရှေိပါတယျ ။ ရောကျမလာခဲ့တဲ့အခါ နားလညျပေးပါ ခှငျ့လှတျပေးပါဆိုတဲ့ စကားတှနေောကျမှာ ကြှနျမ ဘာကွောငျ့ ခှငျ့မလှတျနိုငျခဲ့ဘူးလို့ ထငျတယျ ။
အလေးမထားပါလား တနျဖိုးမထားပါလားဆိုတဲ့ အတှေးတှေ တဈစီတဈတနျးကွီး ခေါငျးထဲ ဝငျလာတဲ့အခါ ကြှနျမ မှာ ဝမျးနညျးရတယျ အဲ့ဒီအစားဒေါသတှေ ထှကျခဲ့မိတာပါ ။ နားလညျမပေးနိုငျတာမဟုတျပဲ မြှျောနပေါလားဆိုတဲ့ အသိလေးရှိစခေငျြတာ ။
နောကျဆို ဖွဈနိုငျမယျလို့ထငျတဲ့ ကတိတှကေိုပဲပေးပါ ။ ကတိတှပေေးထားပွီးတဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားတော့ မြှျောလငျ့တတျကွတာ သဘာဝပါပဲ ။
အဲ့ဒီ ကတိပကျြခွငျးတှေ အနောကျမှာ ကြှနျမတို့ရဲ့ ယုံကွညျရဲတဲ့စိတျတှေ ကပျပါသှားတတျတယျ ။ ဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူးဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ခေါငျးထဲစှဲသှားတဲ့အခါ မယုံကွညျနိုငျတာလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးရလောကျတဲ့အထိ ကြှနျမ မမြှျောလငျ့တတျပဲ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ ။
တကယျတမျးကတြော့ ကြှနျမ… မြှျောလငျ့သငျ့သလောကျ မြှျောလငျ့ခဲ့ဖူးသလို ယုံကွညျသငျ့တာတှထေကျ ပိုပွီး ယုံကွညျခဲ့မိတာပါ … အဲ့တာတှေ ဖွဈမလာတဲ့အခါ ကြှနျမမှာ မြှျောလငျ့နမေိတဲ့စိတျကို မုနျးမိသှားတာ ။ ဒါပါပဲ ။
စောင့်ရခြင်းတွေ မျှော်ရခြင်းတွေဟာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းစေလဲဆိုတာ စောင့်ခဲ့ဖူးသူတွေ မျှော်ခဲ့ဖူးသူတွေပဲ သိပါတယ် ။ ပေါ်လာနိုးနိုး ပေါ်လာနိုးနိုးနဲ့ မျှော်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံပေါ့ ။
လာခဲ့မယ်လို့ ပြောထားခဲ့ရင်တော့ မမျှော်ပါဘူးလို့ ဘယ်လောက်ပြောပြော ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ မျှော်မိနေတတ်တဲ့ စိတ်လေးတွေရှိပါတယ် ။ ရောက်မလာခဲ့တဲ့အခါ နားလည်ပေးပါ ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုတဲ့ စကားတွေနောက်မှာ ကျွန်မ ဘာကြောင့် ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်တယ် ။
အလေးမထားပါလား တန်ဖိုးမထားပါလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေ တစ်စီတစ်တန်းကြီး ခေါင်းထဲ ဝင်လာတဲ့အခါ ကျွန်မ မှာ ဝမ်းနည်းရတယ် အဲ့ဒီအစားဒေါသတွေ ထွက်ခဲ့မိတာပါ ။ နားလည်မပေးနိုင်တာမဟုတ်ပဲ မျှော်နေပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးရှိစေချင်တာ ။
နောက်ဆို ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ ကတိတွေကိုပဲပေးပါ ။ ကတိတွေပေးထားပြီးတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ မျှော်လင့်တတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ ။
အဲ့ဒီ ကတိပျက်ခြင်းတွေ အနောက်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ယုံကြည်ရဲတဲ့စိတ်တွေ ကပ်ပါသွားတတ်တယ် ။ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ခေါင်းထဲစွဲသွားတဲ့အခါ မယုံကြည်နိုင်တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးရလောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ မမျှော်လင့်တတ်ပဲ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ။
တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မ… မျှော်လင့်သင့်သလောက် မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသလို ယုံကြည်သင့်တာတွေထက် ပိုပြီး ယုံကြည်ခဲ့မိတာပါ … အဲ့တာတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကျွန်မမှာ မျှော်လင့်နေမိတဲ့စိတ်ကို မုန်းမိသွားတာ ။ ဒါပါပဲ ။